मन्त्रीहरूले सोधे– श्रीमती र छोराछोरीलाई भेट्न पनि नपाउने हो? – Nepal Japan
नेपाली समय : 07:40:03
जापानी समय : 10:55:03
मन्त्रीहरूले सोधे– श्रीमती र छोराछोरीलाई भेट्न पनि नपाउने हो?
2 March, 2017 12:40 | पत्रपत्रिका | comments | 81450 Views
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान नपाउने आचारसंहिता लागू गरेपछि मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका छन्।
आयोगले बुधबार गरेको छलफलमा मन्त्रीहरूले राजनीतिक दायित्व बन्देज गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन्। निर्वाचनमा दुईवटा गाडी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने आचारसंहिता जारी गरेकोमा पनि मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि छ। आचारसंहिता लागू भएपछि जिल्ला सदरमुकामभन्दा बाहिर जान नपाउने व्यवस्थाप्रति पनि उनीहरूले असहमति जनाएका छन्।
सबै मन्त्रीले शिलान्यास र उद्घाटनमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए। जिल्लाबाट उद्घाटन र शिलान्यासका निम्ता आउने गरेकाले ती कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
घर पनि जान नपाउनू ?
निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको घरमा पनि जान नपाउने गरी आचारसंहिता बनाउन नमिल्ने मन्त्रीहरूको तर्क छ। ‘घरमा गएर श्रीमती, छोराछोरीलाई भेट्न नपाइने हुन्छ ?’ महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री कुमार खड्काले भने।
भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डे, स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीलगायतले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ
मन्त्रीहरुलाई आयोगले भन्यो- हेलिकोप्टर चढेर गाउँगाउँ नजानु
तेस्रोलि‌ंगीको कथा : लक्ष्मीका छोरा जब छोरी बने…
किन ओलीले बनाएनन् योगेश भट्टराईलाई मन्त्री ?